Pez, nchịkọta akpụkpọ ụkwụ SS22 ọhụrụ nke Naguisa | Bezzia
Maria onyekwere | 15/06/2022 18:00 | Akpụkpọ ụkwụ
Naguisa bụ otu n'ime ụlọ ọrụ Spanish ndị ọ ga-amasị m ịchọta n'ime akwa akwa m. Egosiri m gị atụmatụ ya na mbụ na Bezzia na nke a agaghị abụ oge ikpeazụ ọ na-eme ya. Ma ọ bụ nke ọhụrụ Nchịkọta akpụkpọ ụkwụ SS22 nke Naguisa O mewo ka m kwenye ọzọ!
Pez bụ òkù inyocha na mebie ya na ndị guzosiri ike. Nchịkọta sitere n'echiche nke anyanwụ na mmiri, na nchapụta nke textures a kpụrụ akpụ nke azụ na ụfọdụ n'ime agba dị egwu nke anụ mmiri. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ na-ejikọta ụda agba na nchịkọta nke oge gboo ya na-enweghịkwa.
Enwere m ekele maka mkpọsa na-etinye ngwaahịa na ntụpọ ma gosipụta ya nke ọma. Ma eleghị anya, ọ bụ ya mere m ji amasị ha nke ukwuu. Foto nke Cecilia Renard, onye Silvia Gutiérrez nyere iwu ka o si eme ya. N'ime ha anyị nwere ike ịghọta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ nke ụlọ ọrụ ahụ, akara ngosi ya na espadrilles; na-echepụta ha niile maka ụbọchị ruo ụbọchị.
1 Akpụkpọ ụkwụ
2 Ihe espadrilles
Akara ngosi mbinye aka dị ọzọ na mkpokọta ọhụrụ a. Taa, Otú ọ dị, anyị na-elekwasị anya na atụmatụ nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ igosi na mgbasa ozi ya. Na akpụkpọ ụkwụ Anea na-acha odo odo nke maxi-mmetụta kpara akpa akpụkpọ anụ na na Falua, ihe nlere nke ejirikwa obere ikiri ụkwụ kpara akpa nke ejiri eriri na-agafe n'ụkwụ ahụ maka nkwado ka ukwuu.
Tinyere ihe ndị dị n'elu, Barbo na-apụta maka ntụgharị ya, akpụkpọ ụkwụ T-ụdị nke nwere akpụkpọ anụ atụrụ, mkpịsị ụkwụ na-emeghe na nkwonkwo ụkwụ. Na nke akpụkpọ ụkwụ nshịkọ Amura na Alosa. Nke mbụ dị ala na agbakọta agba; nke abụọ na ngụkọta elu nke 6,5 centimeters na ire ụtọ.
Ihe espadrilles were nnukwu ọrụ na mgbasa ozi ọhụrụ a. Ha pụtara maka agba Ancor ha, espadrille nwere velcro na mbelata akpụkpọ atụrụ dị na odo, brownie na oji; na Bullo, otu akpụkpọ ụkwụ ikpo okwu na ngọngọ ikiri ụkwụ, gafere mbe na shọvel, mkpịsị ụkwụ mepere emepe na kechie nkwonkwo ụkwụ.
Ị na-amasị ihe ọzọ kpochapụwo? Ị ga-ahụ n'anya Soc, espadrille sitere n'ike mmụọ nsọ "espardenya" egwu mpaghara rịbọn asaa; na Thalis, akpụkpọ ụkwụ ụdị nshịkọ nke na-ekpuchi mkpuchi anyị na nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị mma na eriri.
Nchịkọta akpụkpọ ụkwụ SS22 nke Naguisa na-amasị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Akpụkpọ ụkwụ » Pez, mkpokọta akpụkpọ ụkwụ SS22 ọhụrụ nke Naguisa
Ihe ize ndụ nke idealizing onye